Wiseplay dia nohavaozina manampy fanatsarana manan-danja | Vaovao IPhone
Raha ny fahitana fahitalavitra amin'ny iPhone na iPad dia tena vitsy ny safidy azontsika atao raha tsy manana ny pejin-tranonkala amin'ireo sehatra fahitalavitra samihafa isika, raha mbola mamela anao handefa izany amin'ny Internet ny zon'ny fampielezam-peo, satria azo antoka fa imbetsaka tamin'ny fotoana iray no nisehoan'ilay afisy faly fa ny zon'ny programa na sary mihetsika toy izany dia tsy mamela ny famoahana azy amin'ny alàlan'ny tranonkala. Ao amin'ny Android dia misy fampiharana marobe azo zahana hijerena fantsom-bahoaka sy karama (lojika ivelan'ny Google Play) kanefa, amin'ny iOS, noho ny fetran'ny App Store, dia saika tsy azo atao izany, raha tsy hoe mampiasa avy amin'ny ny fampiharana Wiseplay.
Wiseplay amin'ny fampiharana izay ahafahantsika milalao atiny video amin'ny alàlan'ny streaming Raha mbola manana ny rohy mifandraika amin'izany izahay, satria tsy manolotra ho anay teratany ilay rindranasa, noho izany dia afaka mandalo ny sivana ao amin'ny App Store izy. Raha te hankafy ireo fantsom-bahoaka sy karama ianao, dia mila mitady lisitry ny Internet .m3u sy .w3u ahafahanao manampy azy ireo amin'ny fampiharana mba hahafahantsika mankafy fahitalavitra na aiza na aiza no tadiavinay.
Vao nahazo fanavaozana vaovao i Wiseplay manampy fiasa vaovao ary manatsara ny fahombiazan'ny fampiharana amin'ny ankapobeny, rindranasa iray manolotra dokam-barotra ho antsika, dia azo alaina maimaimpoana maimaimpoana, dokam-barotra izay azontsika esorina raha mampiasa ny fividianana fampiharana izay manana vidiny 3,99 euro.
Inona no vaovao ao amin'ny Wiseplay 2.1.0
Nihatsara ny efijery fitetezana.
Safidy iray nampiana izay ahafahantsika manatsara ny endrik'ilay horonantsary.
Ny kaody fampiharana dia novaina sy namboarina.
Isaky ny manavao ny lisitra iray izay nampiana dia hahazo fanavaozana izahay.
Nohatsaraina koa ny fanafarana lisitra w3u sy m3u.
Fanohanana vaovao ho an'ny horonantsary VR.
Fanohanana ho an'ireo mpampiantrano horonantsary vaovao.
Nohatsaraina ny fitetezana tranonkala vita.
Nahitsy ny bibikely kely hita tamin'ny kinova taloha
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Wiseplay dia nohavaozina manampy fanatsarana manan-danja
Podcast 8x23: iPhone mena ho an'ny martsa